R/W Kheyre oo hanjabaad culus hawada u mariyey siyaasiyiinta mucaaradka - Caasimada Online
Home Warar R/W Kheyre oo hanjabaad culus hawada u mariyey siyaasiyiinta mucaaradka
R/W Kheyre oo hanjabaad culus hawada u mariyey siyaasiyiinta mucaaradka
Muqdisho (Caasimadda Online) – Ra`iisul Wasaaraha xukumadda fedraalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo maanta ka qeyb galay munaasabad loogu dabaal dagayay la soo wareegitaanka Hawada Soomaaliya oo muddo badan laga maamulayay dalka dibadiisa ayaa sheegay in ay ka midtahay horomarada socda ee dowlada ay ku talaabsaneyso, la soo wareegitaan Hawada.
R/W Kheyre oo khudbad ka jeediyay munaasabada ayaa ka hadlay arimo badan wuxuuna RW Kheyre carabka uu ku dhuftay in dowlada Soomaaliya ay ka go`antay in ay dib ay usoo ciliso waxyaabaha ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed ee ka maqan.
Xasan Cali Kheyre ayaa amaanay Wasiirka Wasaarada Gaadiidka iyo Duulista hawada ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Oomaar, kaas oo uu sheegay in uu ka qeyb qaatay dadaaladaan la gaaray.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in waqtiagan dalka Soomaaliya uu dhinac walba ka gaaray horumar,isla markaana taasi ay sabab u tahay shaqa adag oo ay sameeyeen madaxda dalka.
Waxa uu sheegay in dalkeena guulaha uu gaarey ay ka mid yihiin dhinacyada dhaqaalaha,Amniga,Siyaasada loo dhan yahay,dhinaca xiriirka Caalamiga ah iyo la-dagaalanka musuq maasuqa,isla markaana cid allaala cidii isku-dayda in dalka dib ay u celiso aan loo dul qaadan doonin.
Ra’isulwasaare Kheyre ayaa yiri “Guul walba oo dalkeena uu gaaro waxay ku timaadaa dadaal badan oo la sameeyey,laakin waxaa jira kuwa ay dhibeyso mar walba in kobac dhaqaale iyo in horumar la gaaro laakin waxan leeyahay wuu dhamaaday waqtigii la’idiin dulqaadan jiray”